Haleellaa Niwu Yoork: namni konkolaata guddaa oofaa ture tokko namoota saddeet ajjeesse - BBC News Afaan Oromoo
Maanhaatan keessatti dandii biskilitii irra konkoolaataa guddichaa ofuun, yoo xiqqaate namootni saddeet wayita lubbuu isaanii dhaban namoonni 11 immoo midhaa cimaan irra gaheera.
Namni umurii 29 tokko konkoolaata Piikaapii adii keessa wayita gadi bahaa jirutti poolisiidhaan madeeffamee qabamuun isaa beekameera.
Booda irra poolisiin haleellaa shororkeessumma akka ta'e beksiisaniiru.
Saayfuuloo Sayipooy akka jedhamu maqaan isaa miidiyaa irratti kan himame namni kun koolu galaa bara 2010 keessa gara Ameerikaa dhufeedha.
Yaadannoo ykn barreefami Islaamiik Isteet akka konkoolaata isaa keessatti argamees, nagaa eegdonni madda oduu CBS'tti himaniiru.
Maqaan nama shakkamaa kanaa Saayfuuloo Saaypoov ta'uu fi suuraa bara 2016 kun isa ta'u miidiyaan Ameerikaa adda baaseera.
Jireenyi isaa Filooriidaa kan ta'e shakkamaan kun gara hospitaalaatti geefameera.
Kantiibaan magaalaa Niwu Yoork Biil de Bilaasoo ''haleellaan namoota nagaa irratti godhame kun hojii dabeessaati'' jechuun balaallefataniiru.
Itti dabaluunis ''kun qalbii keenya cabsuuf kan godhameedha garu, nu namoonni Niwu Yoork namoota cimoodha, namoota balaa kamiin iyyuu dandamataniif hojii jeequmsa akkanaatiin salphaatti hamileen keenya kan hin cabnee fi kan hin sodaanneedha,'' jechuun dubataniiru.
Pireezidaant Doonaald Tiraamp tiwiitarii isaanii irratti: ''Yaadaa fi kadhannaan namoota magaalaa Niwu Yoork keessatti shororkeessummaan balaan irra gahee fi maatii isaanii waliin jirra jedhan.
"Waaqaa fi biyyi keessan isinii wajjin jiru,'' jechuun barreesaniiru.
Koomiishinarri Qajeelcha Poolisii Niwu Yoork Jems O'Neyeels ''miidhaan namoota irra gahe cimaa haa ta'u malee lubbu isaanitiif hin sodaachisu'' jechuun dubbataniiru.
Odeefannoo dhuma irratti isaan gahee irratti hundaa'uun, haala dhalate kana akkanatti ibsaniiru:
Akka lakkoofsa biyya sanaatti sa'aatii 9 waaree booda, konkoolaataa kiraan dhaabbata 'Home Depot' jedhamurraa fudhatame tokko daandii miilaa fi biskileetiin irra deemanirra bahuun lafa dheera namoota irra oofee.
Kana booda konkolaatan isaa atobisii mana barumsaatti rukutamuun namoota gurguddoo lamaa fi ijoollee lama madeessuun dhaabate.
Konkolaachisichis konkolaataa keessaa qawwee harkaa lama qabatee bu'uun jechoota 'akka haleellaa shoroorkeesummaa ta'e ibsan' dubbate.
Poolisii nannoo balaan kun itti raawatametti argamuun garaa keessa rasaasaan rukutame.
Qawwee gosa addaa addaa lama bakka balaan sun itti mudaterraa argame.
''Namoonni lubbuun isaanii darbeefi kan midhaaman hojii yookaan barnoota irraa deebi'aa kan turan akkasumas caama sa'a booda jiru kana keeessa biskileetii isaanii qabachuun kan bashannanaa turaniidha,'' jechuun komiishinarri kun dubbataniiru.
''Kun Magaalaa Niwu Yoork qofaaf utuu hin ta'iin namootaa fi maatii bakka hundaatti argamaniif illee balaa haalaan guddaa fi kan nama gaddisiisuudha.''
Wayita namoonni magaalaa kanaa hedduun 'Haalowiin' ayyaneffachaa jiran kanatti cacaabaan biskileetoota konkoolaataan kun irra deemee bakka bakkatti mul'ata.
Akka namni ijaan arge Eyuugine jedhamu tokko ABC Chaanalii 7tti himetti, piikaapiin adiin kun irraangadee mana barnoota sadarkaa lammaffaa Istuuyversaant qabachuun ariitiin fiiga akka tureefi namoota hedduu irra deemaa gadi bu'uu isaa dubateera.
Itti dabaluunis dhukaasa sagal yookaan 10 ta'u akka dhagahe dubbateera.
Namni biraan maqaan isaa Firaank jedhamuus dhaabaata TV kan NY1 jedhamuutti naannoo bakka karaan walitti dhufutti nama asiif achi fiiguu fi rasaasa shani hanga ja'aa ta'u dhukaasaa ture argeera jechuun dubbateera.
''Waan tokko akka inni harkatti qabatee turee argeera, garuu maal akka ta'e baruu hin dandeenye. Haa ta'u malee akka jedhanitti wantii sun qawwedha," jedha.
''Wayita Poolisoonni itti dhukaasan, namoonni hundi weeraruun baqataniiru. Kana booda yeroon ilaaluu yaalu, namni sun qaata kufeera.''
Dhimma kana ilaalchisees Prezidaant Donaald Traampiif ibsi akka kename Waayit Haawuus beeksiiseera.
Ragaalee jiran walitti fiduu
Niik Biriyaant, BBC News, Niwu Yoork irraa
Yeroo ammaatti angaawwonni Niwu Yoork kun hojii nama tokkooti malee kan bal'inaan irratti koratamee hin fakaatu jedhaniiru.
Haa ta'u malee ragaa argaman hundaa walitti fiduun maal akka ta'e baruuf qorata akka jiran beeksiisani.
Haaleellaan kun kan raawwate guyyaa 'Haalowiin' irratti. Ayyaanni 'Haalowiin' Niwu Yoork keessatti ayyanoota guddoo kabajaman keessa tokko.
Dandiin hundi ijoollee huccuu ayyaana kanaaf ta'u addaa addaa ufataniin kan guutee dha. Bakki ijoolleen taphattus naanno sanatti argama ture - haala sukkanneessa ture.
Bakki kun naannoo haleellaan sukkanneessaan kan namoota hedduu galaafate bara 2001 keessa itti raawwatetti baay'ee dhihoodha.
Kunis Niwu Yoork ammas xiyyeffannaa shororkeessitoota jala akka jirtu poolisootaaf ifa ta'eera.